Ny MCE Eoropa afovoany sy atsinanana dia nifarana tany Zagreb, Kroasia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kroasia » Ny MCE Eoropa afovoany sy atsinanana dia nifarana tany Zagreb, Kroasia
Febroary 23, 2018
Ny MCE Europe afovoany & atsinanana fahavalo dia vita am-pahombiazana tao Zagreb Kroasia tao amin'ny hotely Dubrovnik, Zagreb.
Vahoaka marobe efa ho 150 ny toerana itodiana, mpamatsy MICE ary mpividy hetsika no nankany amin'ny renivohitra tsara tarehy any Kroasia nandritra ny 2,5 andro ny tambajotram-pifandraisana, ny fiaraha-miasa, ny fanabeazana fa ny ankamaroan'ny zava-drehetra, mba hifandraisana mandritra ny B2B efa voalahatra sy natao. fivoriana. Ny endrika fifanakalozan-kevitry ny kongresy eropeana sy programa isan-karazany dia nanome toky fa hisy vokatra avo lenta ao anatin'ny fotoana fohy. Ankasitrahana ity fahombiazana ity satria mampihena ny ora amin'ny birao ary mampitombo ny vokatra.
Natomboka ny alahady teo ny seha-pifanakalozan-kevitra tamin'ny fandraisana tamim-pankasitrahana tao amin'ny hotely Dubrovnik any Zagreb niaraka tamin'ny lahatenin'i Iva Pudak-Mihajlovic, mpitantana ny Birao Nasionalin'ny fizahan-tany Kroaty, Zlatan Muftic, Tale ao amin'ny Birao Fifanarahana Zagreb, Gordan Susak, Tale Jeneralin'ny mpampiantrano. toerana fandraisam-bahiny sy Alain Pallas, Tale mpitantana ny kaongresy eropeana.
Ny hariva dia nitohy tany amin'ny Esplanade Hotel Zagreb, izay nanoloran'ny Kongresy an'i Eropa sakafo hariva mahafinaritra ho an'ny mpandray anjara rehetra niaraka tamin'ny fialamboly folkloric sy majika tao amin'ny Emerald Ballroom ao amin'ny hotely.
Ny alatsinainy dia nanolotra ny famelabelarana fohy sy mahafinaritra an'ny toerana maro any Eropa sy Atsinanana mandray anjara. Nandritra ny fotoam-pivoriana fanokafana, ny mpividy mpandray anjara rehetra dia tokony hijery ny faritra CEE. Nanaraka izany ny fanombohan'ny fivoriana B2B malaza. Tena niasa ny mpandray anjara rehetra ankehitriny, miresaka sy manao raharaha. Ny andro dia nitohy tamin'ny hetsika ara-tsosialy, fivoriana bebe kokoa, fiaraha-misakafo atoandro amin'ny tambajotran-tserasera, fampisehoana marin-teny mahatalanjona nataon'ny tale jeneralin'ny Meetology Lab, Jonathan Bradshaw ary fivoriana maro hafa. Ny programa andro be andro dia nitohy tamin'ny fandaharana hariva tao amin'ny tranombakoka Mimara tsara tarehy. Miaraka amin'ny orinasa Majetic Catering, ny tranombakoka ary ireo mpiara-miombon'antoka hafa ny hariva sy ny programa dia nanjary fahombiazana be voninahitra.
Inona no fomba tsara kokoa hifohazana noho ny fahazoana loka? Ny talata maraina dia nitondra izany ihany tamin'ny fivoriana fanokafana ny andro. Nisy fivoriana maro hafa nisesy, nisarahana tamin'ny fisotroana kafe mendrika ihany. Tonga sahady ny fivoriana famaranana ary natolotra ny fiderana noho ny fanampian'ny mpiara-miombon'antoka rehetra amin'ny forum sy ny famonjena avo lenta ny forum nataon'ny Kongresin'i Eropa.
Nanontany ny talen'ny mpitantana ny kaongresy eropeana, Alain Pallas momba ny fahombiazany izay nambarany: "Ho anay Kongresin'i Eropa dia mahomby ihany ireo forum raha mahomby amin'ireo mpandray anjara. Ny fisafidianana ireo mpandray anjara marina izay liana amin'ny fiaraha-miasa miaraka no singa fototra hahombiazana amin'ny fanaovana izany. Mazava ho azy fa ny programa fandaharana isan-karazany, ny fanaterana tsy misy kilema ny forum sy ny fiarovana ny fivoriana rehetra hitranga araka ny kasaina hatao dia manome toky ny tsirairay hanana traikefa tsara miaraka amin'ireo mpiara-miasa vaovao. Faly izahay amin'ny valin-kevitra tsara dia tsara hatreto ary hiezaka hatrany izahay hanao izay hahalalany ireo dinika manaraka ''.
Ny kongresy eropeana dia nihoatra ny nantenain'izy ireo indray ary mbola hanohy hiaraka hametraka forum hafa malaza roa, ny MeetingPlanners Russia, amin'ny 10 sy 11 septambra any Mosko sy MCE Eropa atsimo ny 21 ka hatramin'ny 23 Oktobra ao Tesalonika.
Nahavita dingana lehibe iray hafa ny Ethiopian Airlines
Hamiratra tsara i Bruxelles